Ebe obibi ala n'elu saịtị: ma ị ga-ekpochapụ ahụhụ ahụ - Nchịkọta pesti - 2020
Ndị ọkachamara nwere ahụmahụ, ma eleghị anya, amaolarịrị ndị dị otú ahụ (Carabidae) dị otú ahụ na ọrụ ndị bara uru ọ na-arụ n'ubi ahụ.
Maka ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ubi, ọ gaghị abụ ihe na-enweghị atụ iji mụtakwuo banyere nnukwu ebe a, bụ nke na-emekarị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ógbè nile anyị. A na - akpọkwa ebe a - ọhịa ọhịa, ubi, nkịtị.
Ọ dị mkpa! Maka ubi ma ọ bụ ogige, ụdị ụdị anụ ndị a nile ga-aba uru, ma e wezụga otu - ala nke ala (obere ala ojii), nke a ga-ebibi ma ọ bụrụ na ị nwere ọka.
Atụmatụ nke ndụ nke ala ebe
Kedu ihe iji nsị ala na-eme n'ubi, otu esi esi adọta ala
Ala nwere ike imebi ogige
Otu esi emeso ala ebe
Akwụ ala: nkọwa
Na-ekwu maka otu ala si dị n'ala, ọ dị mkpa ka ị mara na ụdị nke ebe a dịgasị iche iche na anyị nwere ihe ruru 2700 nke ala ala ya. Esemokwu ga - adị nha - nha ahụ, ụkwụ, antennae, agba, ihe ụfọdụ nke mmepe nke ụmụ ahụhụ.
Ị ma? Na mkpokọta, ihe karịrị mmadụ 32,000 (!) Nnochite anya nke ndị na-anọchite anya ala na-ama n'ụwa.
A na-ahụkarị ala ebe a na-eme ihe ubi bụ nnukwu afụ ọnụ ebe ugwu ruo 1.7-3 cm n'ogologo, nke agba agba graphite na-acha uhie uhie. Na ahụ na flaps - obere isi ọlaedo, dents na oblong grooves. O mepere ụkwụ dị ike nke na-ahapụ gị ka ị na-aga ngwa ngwa ma jiri nwayọọ nwayọọ na-agagharị, nakwa, dịka ala ebe ugwu bụ onye na-eri anụ, ike dị ike.
Ụmụ nwanyị na-edina site na ntan 50 ruo 80 n'otu oge, na-ahọrọ maka ebe a na-amị mkpụrụ, nke dị mma n'ahịrị n'elu ụwa. Mgbe ahụ, àkwá ahụ si na larvae pụta. Na oge (site na 3-4 izu na n'ụdị ụfọdụ ruo afọ abụọ) nwa ogwu nke ala na-aghọ red, nke ahụ na-aghọ ụmụ ahụhụ tozuru oke. Ndị okenye na-ehi ụra n'ehihie - ha na-achụ nta n'abalị, mana n'ụbọchị ha na-anọ na ndo. Kedu ihe ebe ala na-eri na ebee ka ala dị ndụ? Ọ na-eri nri na caterpillars, nana-echere ikpuru, slugs, snails, yana obere ụmụ ahụhụ, ijiji, mollusks, mkpụrụ na mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ. Ebe obibi ebe ala bi na ya bụ ala ala na-adịghị emighị emi, ma ọ bụ n'elu ala dị n'okpuru ahịhịa, bushes, na n'okpuru nkume. Akwukwo ebe obibi bi n'ime obere ndi mmadu, nke nwere ike gunyere umu nke di iche iche.
Ị ma? Ala ala bụ ebe dị ogologo. Ndụ - 3-5 afọ na ezigbo winters, na-ezo n'okpuru barn, ụlọ nchekwa, ntọala nke ụlọ.
Akwukwo uzo na-eri umu ohia, umu anu mmiri, ndi ogwu na ndi mmadu, ndi bibie ubi ubi na ubi. Ala ala bụ ụzọ kachasị mfe, nke dị mma na nke gburugburu ebe obibi iji merie pests ndị a. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na enwere ala dị ọtụtụ, mgbe ahụ ị nwere ike ime n'enweghị chemicals na ọgwụ iji gbochie pests. Ma si otú a nweta ihe ubi dị ọcha ma zere itinye ego na nchebe na-enweghị isi.
Ala ebe ugwu na-echekwa ihe ọkụkụ ahụ site n'ibibi pests ndị toro eto na, n'eziokwu, anaghị ekwe ka ha mụbaa. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụghị usoro ọgwụ ọjọọ niile na-eme nke ọma na ọkwa dị iche iche nke mmepụta anụ, na kpọmkwem n'ihi nke a, ọ dị mkpa ime ọtụtụ sprays kwa oge.
Ọ dị mkpa! Na nkezi nke ala otu ala na ọnwa okpomọkụ na-egbu site na 150 ruo 300 larvae, pupae na okenye adult caterpillars.
Ya mere, iwu ndị a adịghị mkpa ka e bibie ha, kama ọ bụ ihe dị mma iji mee ka ndị bi na mpaghara ha dịkwuo elu. Ọ bụrụ na ajụjụ a bụ otu esi enweta ngwa ngwa na ala ubi gị n'ubi ma ọ bụ ubi, mgbe ahụ, nke mbụ, ịkwesịrị ịmepụta ebe obibi ha. Iji mee nke a, na-ahapụ na ibe nke osisi ogbugbo, ikpo nke epupụta, sawdust, obere nkume - niile ga-abụ ebe mgbaba maka chin. Nke abuo, oburu na o kwere omume, adighi eji chemicals maka ichikota umu ogwu. A na-enwe ọgwụ ndị dị n'ime ala na-emetụta ha.
Ndị na-eri nri na ala bụ anụ ufe, ma ha na-eme ya n'ihi otu akụkụ nke ahụ. Na ihe ize ndụ (nakwa maka nchịkwa nke anụ ọhịa), enwere na-ebute ihe na-adịghị mma, ya mere ụmụ nnụnụ na-anwa izere ebe obibi.
Maka ubi, ihe ubi na ihe ubi, ọka (oji) ma obu hunchbacked pune dị ize ndụ. Ihe kpatara ya bụ ihe ala ebe a na-eri. Kama nke ubi pests, ọ na-eri epupụta, Ome (larvae) na ọka nke ọka, na abụọ cultivated, nke kacha mkpa, na ọhịa. E wezụga eziokwu ahụ bụ na ndị na-eri nri na-eri mkpụrụ, ha na-amanye ntị, mkpụrụ ọka dum na-ada n'ala. Mfelata mkpụrụ nke nwere ike ịbụ 30-35 grains na 10-12 ụbọchị site na otu okenye ebe.
Ala nke ala na nkọwa dị iche na ubi. Ọ dị oke oji na agba, obere - 1.3-1.6 cm n'ogologo, na-acha aja aja ma ọ bụ ọbara ọbara antennae, n'ụzọ zuru okè na-emegharị na ikpo ọkụ na ihu igwe dị ọkụ. Ọnụ ọgụgụ kasị elu nke mwakpo nke bred beetles na kụrụ - njedebe nke May na mmalite nke June.
Ị ma? Ala ala ala na-emetụtakwa ọka. Ma mgbe ufodu na enweghi ihe oriri iji di ndu, o nwere ike iri nri na osisi ahihia.
Ala ebe pesti bụ susceptible ka ndị na-esonụ ụmụ ahụhụ - pyrethroids, neonicatinoids, organophosphates. Ndị a bụ chemicals e ji mee ihe n'ubi maka ịkụcha mkpụrụ na mgbakwasị mkpụrụ tupu ịgha mkpụrụ. E nwere agrotechnical usoro, otu esi emeso ala ojii ala. Nke a bụ owuwe ihe ubi zuru oke nke ihe ubi ndị gara aga, nkwanye ùgwù maka ịgha mkpụrụ ọkụkụ, ịkọ ubi na ịgha mkpụrụ ahịhịa ọka, ịgha mkpụrụ ọzọ na-achọsi ike.
Ndị ọrụ ugbo agaghị enwe ike ịmara banyere ihe okike, ndị nwere ike ịnweta onye ọ bụla na usoro na-adịghị emerụ ahụ nke nchịkọta pesti n'ime ubi na ubi ubi.